Nixon dia manolotra ny The Mission, famantaranandro mahatohitra miaraka amin'ny Android Wear | Vaovao momba ny gadget
Nixon dia manolotra ny Misiona, famantaranandro mahatohitra miaraka amin'ny Android Wear
Mila Smartwaches henjana isika ary mila azy ireo izao. Nixon dia nandeha niasa nitondra antsika The Mission, smartwatch mahafinaritra noforonin'ny orinasa iray mahazatra. Ity famantaranandro vaovao ity dia mifantoka amin'ireo mpampiasa manao fanatanjahan-tena. Ity famantaranandro ity dia natao haharitra sy mahazaka ny tontolo iainana mafy indrindra, indrindra ny fandinihana ny habetsaky ny fahasamihafana misy eo amin'io lafiny io eo amin'ny tsena. Mazava fa, Raha toa ianao ka milalao onja, mihanika na MTB, ity Nixon The Mission ity dia tsy isalasalana fa fitaovana fitafianao. Holazainay aminao bebe kokoa momba ny The Mission sy ny antony mahatonga azy io ho safidy mety indrindra.
Ity smartwatch ity dia miasa mivantana amin'ny Surfline sy Snocountry, fampiharana fitantanana data roa. Ny fitaovana dia manana fanoherana ny fanitrihana hatramin'ny 100M ary mazava ho azy ny famonoana anti-shock. Ho 40mm ny savaivon'ity tranga ity, misy endrika boribory, ahoana no hitranga raha tsy izany. Ao amin'ny efijery dia hisy Cornin Gorilla Glass, na dia tsy nilaza aza izy ireo hoe fanontana inona no hampiasainy. Mikasika ny fitaovan'ny tranga, vy tsy misy fangarony 316L, ny tsara indrindra eny an-tsena ho an'ity karazana fitaovana ity, miantoka ny faharetana sy ny fanoherana amin'ny faritra mitovy.
Miaraka amin'ny Android Wear, manana fanohanana an'i Google Fit izy io, fikarohana amin'ny feo amin'ny alàlan'ny Ok Google sy ny fifehezana ny fihetsika hita ao amin'ny rafitra fiasa. Raha hihetsika dia hanana Snapdragon Wear 2100 isika avy amin'ny Qualcomm fanta-daza, ny ekipan'ny Nixon dia tsy te-hiahiahy amin'ny zava-drehetra, na dia hanaporofo izany aza ny vidiny.
Mikasika ny fanaingoana dia manana izahay Tady 20 samy hafa sy loko 15 samy hafa, manomboka amin'ny fehy fototra amin'ny plastika, hatramin'ny singa metaly tsara indrindra. Fa mazava ho azy, izany rehetra izany dia hita taratra amin'ny vidiny. 10 Oktobra dia avy amin'ny 400 euro, na dia manodidina ny € 50 aza ny tadiny tsirairay. Azonao atao ny mividy azy amin'ny hevi-dehibe amidy, na dia ampirisihinay hampiasa azy io amin'ny tranokalanao manokana amin'ny andro fanombohana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Nixon dia manolotra ny Misiona, famantaranandro mahatohitra miaraka amin'ny Android Wear
SanDisk dia gaga anay tamin'ny karatra SD 1 TB
Parrot Disco, mahatsapa ho toy ny vorona manana ity drone ity sy ny solomaso misy azy